ITurkmenistan Ivalela AmaNgqina KaYehova EjeIe Ngenxa Yenkonzo Yawo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Babanjwe Ngenxa Yenkonzo Yabo
NgoJanuwari 2018 urhulumente waseTurkmenistan wavalela amaNgqina kaYehova amabini, uArslan Begenjov noKerven Kakabayev, kuba bengavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Ukususela ngoFebruwari 2015, bangamaNgqina KaYehova okuqala aye avalelwa ngenxa yesi sizathu, nangona lo rhulumente engazange ayeke ukubaphatha kakubi abantu abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela. Bobabini aba bafana bavalelwe kwijele ekuthiwa yiSeydi(LBK-12), apho akhoyo noBahram Hemdemov, owavalelwa kwiminyaka emithathu eyadlulayo.
Kubanjwa UBahram Hemdemov Engenzanga Nto
Nge-14 kaMatshi 2015, amapolisa aseTurkmenabad adubuleka kwintlanganiso yamaNgqina KaYehova eyayisemzini kaBahram Hemdemov. Apho kwabanjwa amaNgqina KaYehova ayi-38 aza abekwa ityala lokukhonza ngendlela engekho mthethweni. Bonke baphathwa kakubi, abayi-30 babhataliswa imali baza abayi-8 babanjwa iintsuku eziyi-15. Kamva, iNkundla yeNgingqi yaseLebapyagwebela uMnu. uHemdemov iminyaka emine ejele, apho wagula kakhulu, eguliswa ziimeko ezimbi awayephila phantsi kwazo kwijele yaseSeydi. Nangona umongameli walapho eqhele ukukhulula amabanjwa ngonyaka, yena akakamkhululi nangoku.
Ukungahlonitshwa Kwamalungelo Abantu Kuseyingxaki
Ngo-2015 nango-2016 iKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo yangqinelana neziyi-10 izikhalazo zamaNgqina KaYehova awayevalelwe phantsi kweemeko ezibuhlungu kuba engafuni ukuya emkhosini. Sithetha nje, amaNgqina KaYehova asalindele impendulo yale komiti kwezinye izikhalazo zawo eziyi-7.
NgoAprili 2012, le komiti yaxelela urhulumente waseTurkmenistan ukuba “makaqinisekise ukuba imithetho yelizwe nezinto eziphathelele ukubhaliswa kweenkonzo ziyalihlonipha ilungelo labantu lokukhonza ngokukhululekileyo, [ngokwesivumelwano seInternational Covenant on Civil and Political Rights].” Ngo-2008 amaNgqina KaYehova afaka isicelo sokubhaliswa, kodwa urhulumente akazange asihoye eso sicelo.
AmaNgqina KaYehova ayambulela urhulumente waseTurkmenistan ngokukhulula amanye awo awayebanjwe engenatyala. Kodwa ke, amaNgqina KaYehova angathanda ukuba lo rhulumente angazenza izinto ezigqitywe yiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo, izinto ezinjengokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, ingakumbi inkululeko yokungenzi izinto ezingavumelani nesazela kunye neenkolelo zabantu. Igqwetha eliwamelayo lithi: “AmaNgqina KaYehova anethemba lokuba ukuthetha norhulumente waseTurkmenistan ngale ngxaki kuza kuwanceda akwazi ukukhonza uThixo enesazela esihle.”
Ibali Elithetha Ngebanjwa
UMnu. uHemdemov uneminyaka eyi-54, utshatile ibe unabantwana abane. Ngexesha awabanjwa ngalo wayengumdala ebandleni, ehlonitshwa nasekuhlaleni. NgoMeyi 2015 inkundla yamwisela isigwebo sokusebenza nzima iminyaka emine ejele kuba nje kuqhutywe inkonzo emzini wakhe. Wavalelwa kwijele engacacanga ekwidolophu yaseSeydi, apho babemhleli ngemibuzo, ebhuqwa kanobom nangabasemagunyeni. Akazange agungqe nangona wayephetheke kakubi kangaka. Inkosikazi kaMnu. uHemdemov, uGulzira, ikhe imane iyokumbona.
Ukuze ubone amanye amaNgqina KaYehova asabanjiweyo ngenxa yenkonzo yawo eTurkmenistan, cofa le linki ingezantsi.
Babanjwe Ngenxa Yenkonzo Yabo—ETurkmenistan (I-PDF)
NgoJanuwari 29, 2018
UKerven Kakabayev uyabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe.
NgoJanuwari 17, 2018
UArslan Begenjov uyabanjwa kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe.
NgoMay 12, 2017
Abasemagunyeni baseTurkmenistan bakhulula uMansur Masharipov owavelelwa nge-30 kaJuni 2016.
NgoAgasti 18, 2016
UMansur Masharipov uvalelwa unyaka, ebanjelwa into angayenzanga.
IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ingqinelana nezikhalazo zamaNgqina KaYehova eziyi-6 zokungavumi kwawo ukuya emkhosini ngenxa yezazela.
NgoDisemba 14, 2015
IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ingqinelana namaNgqina KaYehova amathathu kwizizathu zawo zokungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo. Esinye isigqibo esixhasa amaNgqina KaYehova senziwa nge-19 kaMeyi 2015.
NgoMeyi 19, 2015
UBahram Hemdemov uyabanjwa aze agwetywe iminyaka emine ngenxa yeenkolelo zakhe, kodwa uvalelwe iinyanga ezimbini ngaphambi kokuba lixoxwe ityala lakhe.
AmaNgqina KaYehova amabini awayebanjelwe ukungavumi ukuya emkhosini ayakhululwa. IKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ingqinelana neNgqina LikaYehova kwizizathu zalo zokungafuni ukuya emkhosini.
Kubanjwa amaNgqina KaYehova amabini kuba engafuni ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.
UMongameli waseTurkmenistan ukhulula amaNgqina KaYehova ejele.
Kubanjwa amaNgqina KaYehova ayi-9, ayi-7 kuwo abanjelwa ukungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo, wona amabini abanjelwa iinkolelo zawo, phofu engenzanga nto.
Abasemagunyeni baseTurkmenistan bakhulula uBibi Rahmanova ejele, baze batshintshe isigwebo sakhe seminyaka emine waza wabekwa phantsi kwemiqathango.
UBibi Rahmanova ubanjwa engenzanga nto aze agwetywe iminyaka emine.
Kuvalelwe amaNgqina KaYehova ayi-7, ayi-5 kuwo abanjelwe ukungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo, wona amabini abanjelwa iinkolelo zawo, phofu engenzanga nto.
Kubanjwa amaNgqina KaYehova ayi-26, ayi-13 kuwo abanjwe kungekho bungqina bokuba ophule umthetho. La maNgqina KaYehova ayi-13 kwathiwa abhatale imali.
Kusavalelwe amaNgqina KaYehova ayi-9, ayi-8 kuwo avalelwe kuba engavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo, lona elinye livalelwe iinkolelo zalo, phofu lingenzanga nto.
AmaNgqina KaYehova amathathu akhalazela iTurkmenistan kwiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo kuba ingafuni ukuhlonipha amalungelo awo okungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.
AmaNgqina KaYehova amabini akhalazela iTurkmenistan kwiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo kuba ingafuni ukuhlonipha amalungelo awo okungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo.
Kungekudala emva kokuba iKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo ithethe norhulumente waseTurkmenistan, kwadubuleka amapolisa ayi-30 emzini kaNavruz Nasyrlayev. Ayibetha eyiphinda-phinda le ntsapho nabantu ababelapho.
AmaNgqina KaYehova ayi-10 akhalazela iTurkmenistan kwiKomiti Yamalungelo Abantu YeZizwe Ezimanyeneyo kuba ingafuni ukuhlonipha amalungelo awo okungavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zawo ibe nguNavruz Nasyrlayev oyena uphambili kuloo maNgqina.
AmaNgqina KaYehova afaka isicelo sokuba abhaliswe eTurkmenistan.
Funda la manqaku “ITurkmenistan Ikhulula AmaNgqinna kaYehova Abanjwe Ngenxa Yenkonzo Yawo” ibe “Kukhululwa Umama Onabantwana Ejele ETurkmenistan.”
Babanjwe Ngenxa Yenkonzo Yabo​—ETurkmenistan